Mpanamboatra sy mpamatsy fantsom-pifandraisana 600A | China 600A Cable Accessories Factory
600A 15kV Bushing tapaka tsy tapaka
Anhuang manam-pahaizana manokana amin'ny Integral Deadbreak Bushing, izahay dia manome bushing Integral Deadbreak Bushing avo lenta. Jeneraly: 600A Fialan-tsasatra maty paingotra na vacuum switch bushing dia natao ho an'ny Kabinetra Sampana Cable misy sakantsary Sf6 Loadbreak. Ireo mpampitohy misaraka, toy ny 600A T sy T-11 maty tapaka dia azo ampiasaina amin'ireo bushing ireo. Ireo bushings ireo dia nataon'i Epoxy Resin. Amin'ny zipo dia ataovy izay ahafahan'ny Dead break Rotatable Feed-thru Bushing ampiasaina tsara kokoa. Kitapo anatiny: ● lntegral Famoahana bizina ● I ...
600A Famatorana Tapaka Tee Tapaka
Anhuang manam-pahaizana manokana amin'ny Connector Deadbreak Tee Tap, manome izahay Connector Deadbreak Tee Tap avo lenta. Firafitra: visy mampifandray: visy vita amin'ny varahina vita amin'ny varahina vita amin'ny vifotsy, ary arofanina mba hahazoana antoka ny fandrindrana akaiky. Crimp terminal: miankina amin'ny tariby tariby, safidio ny terminal crimp varahina na terminal crimp-aluminium crimp. Ny sosona ivelany semiconducting: vita vita vita amin'ny vita amin'ny kodiarana EPDM vita amin'ny vy vita amin'ny vy sy tariby mba hahatratrarana ampinga mitohy, ary hahazoana antoka fa ny tapany ivelany Ny fitondran-tena ...
600A Fiomanana amin'ny famonoana maty tampoka
Anhuang manam-pahaizana manokana amin'ny busbar miendrika endrika, manolotra fihaonambem-pahafatesana voafaritra tsara izahay. General: 200A / 600A voafaritra mazava ny fihaonan'ny maty dia manome fiatoana enta-mavesatra roa, telo na efatra 200A ary fiatoana maty 600A, atambatra 15kV mifangaro amin'ny lafiny iray izay miara-miasa anaty sy mahafeno ny fepetra rehetra takiana amin'ny ANSI / IEEE 386-Separable Insulated Connector Systems. Rehefa ampiarahina amina vokatra azo oharina, ny fihaonambe dia manome fifandraisana voaaro tanteraka, voaravaka, azo sarahina ho an'ny vaky entana na maty ...
15kV24kV 600A Fifanekena Busbar mitambatra
Anhuang manam-pahaizana manokana amin'ny fantsom-pifandraisana maty, manolotra fihaonambe maty faran'izay tsara. Jeneraly: 600A ny fiantsonana busbar tapaka ao amin'ny tsipika tariby dia mitana ny andraikitry ny bus. Ny toetrany dia voahidy tanteraka, voaisy tombo-kase tanteraka. 600A busbar dia afaka mampifandray tariby T-type, mpampifandray tariby T-II, fantsom-panafarana 600A ary satroka mitaingina 600A miaraka amina tsipika misy tariby maromaro. Fiaraha-miasa busbe 600A Deadbreak vita amin'ny fitaovana insulated avo lenta. Kitapo anatiny: ● Vatana busbar ● Insta ...
15kV 600A Cap fiarovana
Anhuang manokana amin'ny satroka fiarovan-tena voaro, manome topi-miaro voaro amin'ny insulated avo lenta izahay. Fampidirana ankapobeny: 15kV / 24kV 600A Insulated Protective Cap dia fitaovana fampitaovana natao hiadiana amin'ny herinaratra elektrika ary hasiana tombo-kase mekanika ny lozam-pifamoivoizana. Rehefa ampifandraisina amina vokatra tapaka ny enta-mavesatra ary mifatotra amin'ny tany ny tariby mandeha, ny Cap Insulated Protective dia manome fonony miaro sy manitrika feno volo feno zahana. Ny Cap Fiarovana voaro dia azo ampiasaina ...
15kV24kV 600A Tapaka maty T Connecting Plug
Anhuang manokana amin'ny plug amin'ny Deadbreak Tee, manolotra Connector pug Deadbreak Tee kalitao avo lenta izahay. General: 600A Maty tapaka T Connector Plugs dia ampiasaina hampifandraisan'ny roa na mihoatra ny terminator 600A maty. Maty ny Connector plugs dia ampiasaina amin'ny splice misaraka, na miaraka amin'ny extender bushing, hampitomboana ny halaviran'ny lovia eo alohan'ny fitaovana mankany amin'ny terminator 600A, manamaivana ny fiofanana tariby. Ny Load break Elbows dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny insulated sy semi-conducteur avo lenta ...
Anhuang manokana amin'ny Loadbreak Reducing Tap Plug, manome Loadbreak Reducing Tap Plug izahay. General: 600A / 200A Integral Dead break Bushing dia ampiasaina hanovana ny interface mahazatra 600A maty ho lasa interface tsara 200A enta-mavesatra. Ampiasaina miaraka amina satroka miaro voaroaka 200A, MOV Elbow Arrester, Elbow Grounding na Load break Elbow Connector, fantsom-baravarana maty tsy tapaka iray izay miaro tanteraka. Ho T-Ⅱconnector izany raha mifandray amin'ny mpampitohy T. Kit anatiny: Loadbreak Re ...
600A T mpampifandray maty
Anhuang manokana amin'ny Deadbreak Connector, manolotra Connector Break break avo lenta izahay. Fampiharana ny fenitra: ● Rafitra mpampifandray voasaraka ho an'ny rafitra fizarana etsy ambony; ● ANSI / IEEE Std386-2006600V ● palitao semiconductor hita miharihary ho an'ny fantsom-pifandraisana elektrika avo lenta sy mpampitohy insulated azo sarahina; ● Ireo tariby misy herinaratra voarohirohy sy ny kojakoja misy herinaratra miakatra mihoatra ny 1 kV (Um = 1.2 kV) ka hatramin'ny 30 kV (Um - 35 kV); ● Fomba fitsapana ho an'ny kojakoja ho an'ny herinaratra ...